Rippabliika giddugaleessa Afrikaa: Biyya barsiisonni keessa hin jirre - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Apollinaa'iree Za'oroon yeroo ijoollee barsiisu gammachhuun irraa mul'ata
Biyyatti Riippabliika Jiddugaleessa Afrikaa keessatti mormiitoonni bara 2013 eegalanii wal lolaa jiru. Haala waraanaa kana keessatti barsiisonni cal jechuun hojii isaanii irraa waan badaniif maatii ijoolleef akkaataa itti barsiisan irratti barnoonni hatattamaa kennamaafi jira.
Qonnaan bulaa kan ta'e Apoolinaare Zaa'oroo sanyii facaasuu ilaalchisee waan muraasa ni beeka. Kan inni facaasee fi dhaabe boqqolloofi kaasavaan guddataa, inni ammoo sammuu da'immanii keessatti sanyii beekumsa facaasaa jira.
Manni barumsaa araddaa isaa keessa jiru magaalaa gudditti irraa KM 25 kan fagaatu wayita ta'u barsiisoota hin qabu. Kanaafuu ji'oota sadan darban keessa , Obbo Za'oroo namni ganna 58 kutaa barattoota sadarkaa jalqabaa kan 105 of keessa qabu gaggeessa jiru.
Dagatamuu waggoota kudhaniitti dabalee waggoota afuriif waraanaan waxalamaa turuun biyyatti, guddina akka biyyaatti qabaatu hudhuun: bulchiinsi naannoo, hospitaalonni, kilinikoonni, buufati poolisii akkasumas sirni barumsaa biyyatti akka rakkoo keessa galu godheera.
Akka gabaasa Biyyoota Gamtoomanitti namoota mil 2.3 keessaa - walakkaa kan ta'an - qarqaarsa irratti hirkatanii jiraatu.
Sochiin gartuu hidhattoota %80 biyyattii keessattii gaggeeffama. Ijaarsa manneen barnoota akka kaampiitti (mooraatti) itti gargaaramu. Dirree ijoolleen silaa irra taphattus bakka itti qiyyaafannaa itti shaakalaniidha. Barcumaafi minjaala ijoolleen irra teessuus qoraan godhanii bobeeffatu.
Barsiisonni warri baratan mindaa isaanii fudhachuu hindandeenye. Sababni isaas magaalaa gudditti ala baankiin hin jiru waan ta'eef.
Bofa waliin ciisuu
Waggoota sadan hanga 2016'tti, obbo Za'oroo fi jiraattonni Yambooroo 1,000 walitti aansuun finciltoota Seeleekaa baqataa turan.
Goodayyaa suuraa Akkuma barsiisonni barbaachisan, Jiddugala Rppablika Afrikaatti manni barumsaas haaromuu qabu
''Gara bosonaa fi muka keessa deemuun daggala keessa dhokkana, bakka bofti jiru. Waan nyaatan achitti argachuun baay'ee rakkisaadha. Warra mormitoonni isaanii (farra-balakaa) dhufanii jara nurraa ari'an. Garuu amayyuu sodaa ni qabna,'' jechuun dubbateera.
Kutaa barattootaan guute keessatti, akkaataan obbo Za'ooroon nama kennaa isaan wal argate fakkaatee jira. Haala tokko tokko hojiin agarsiisu (hojii taatoo) jaalachuu isaa kan amanu namni kun wayita barsiisus ijooleetti jabina horuuf waan hedduu godha.
Goodayyaa suuraa Barsiisoonni waan hojii irraa badaniif namni kun qonnaa isaa dhiisee barsisuu jalqabe
Bara 2013 keessa kiristaana kan turan prezidant Firaankoyis Bozizee finciltoota Seleekaa amantaa Islaamaa hordofanin wayita aangoo irra buufaman ture Biyyattin gara waraanatti kan seente.
Warri Seleekaa Faransaayiin aangoo irra buufamuu walqabatee warri mormitootaa jara Balakaa loluun dhumaatii guddaatu raawwate.
Humni waraanaa Biyyoota Gamtoomanii Minuskaa jiru wayita ammaatti magaala guddiitti Baanguuy keessatti qofa mootumma filatame, Faawustiin-Archaangee Tawaaderaa, eegaa jiru.
Goodayyaa suuraa Humni Biyyoota Gamtoomanii magaalaa gudditti Baanguuy qofa to'ata
Gamnii biraan biyyatti yeroo hedduu Seleekaa fi farra Balakaan halleellaan fi addaan cituun irra gaheera. Gartuun lameen kan lola gaggeesan bakka walitti dhufeenya daandii fi qabeenya uumamaa kan akka warqee, meetii fi karaa irra beelada bobbaasan to'achuu irratti.
Obbo Za'oroon maatiiwwan barsiisoo akka ta'aniif leenjiin hatattamaa dhaabbata tola ooltummaa Finlaand irraa kennameef 500 keessa tokko.
Dabalataan maatiin 8,000 ta'an leenjiin bu'uuraa fudhachuuf filatamanii akka jiran beekameera - akka jedhametti garuu 14,000'tu barbaachisa.
Qonnaan bulaan kun hojii isaa kana jaalatee jira. ''Bor biyya koo kana kan gaggeesan (hoggantoota hegereen) barsiisa jira. Kun immoo na gammachiisa na boonsaas. Akka ijoolleen kun jireenya wayyaa'aa an irra gahe darbanii deeman nan barbaada.''
Goodayyaa suuraa Daa'imman kun warra carraa barnootaa argataniidha
Isaa fi maatiin sadi biroon mana barumsaa kana barsiisu. Tokko tokkoon isaanii doolaara 65 ji'aan Ejansiin Daa'immanii Biyyoota Gamtoomanii (UNICEF) kennaaf. Barumsichis ganama sa'a tokko hanga sa'atii 10 waare boodaatti kennama.
''Maallaqa argannu kanaaf jenne miti kan hojjennu,'' jedha namni kun.
Jaalalan barsiisu irra qaburra kan ka'e maasiikoo qotachuu dadhabaan jira. Haa ta'u malee, maatii biroon warri qonnaan bulaan na gargaaran jiru. Yoo na barbaachisuus waan nyaatamu naaf kennu.
Tattaaffiin maatiii-barsiisaa ijoolleen biyyatti akka gara barumsaatti deebi'aniif gumaachaa jira. Garuu kun kan hojjetu araddaawwan hawaasa tokkummaa qaban keessatti. Kunis sirna barnootaa kan biyyattiin barbaaddu irraa guddoo fagoodha.
Amallee bakka hedduutti ijoolleen barachaa hinjiran. Sababni isaas barsiisoonni waan hinjirreef, jedhu jiraattonni.
Akka Unicef jedhutti, biyyatti keessatti lakkoofsi ijoollee barnoota argachaa hinjirre sirriitti yoo hinbeekamne. Garuu, kumadhibba hedduu akka ta'u danda'an eeru.
Waldhabdee Jiddugala Rippablika Afrikaa:
Bara 2013 keessa, hidhattoonni Musliimaa Seleekaa jedhaman aangoo biyyatti qabatan
Irra caalaa loltoota Kiristaana kan qabu fi farra -Balakaa kan jedhamu deebisee loluuf meeshaa kaase.
Lola gaggeefamu kanaanis namoonni miliyoonii tokko ol ta'an ergasi as manaa fi qabeenya isaanii irra buqa'aniiru. Kumaatamnis lubbuu dhabaniiru.
Ji'a Hagayya keessa, Biyyoonni Gamtooman (UN) Jiddugala Rippablika Afrikaa keessatti ''balaan duguuggiin sanyii'' mul'achaa jira jechuun dubbataniiru.
Biyyoota Gamtoomanitti humni nagaa egdota ergama Minuskaa jedhamuun beekaman 13,000 ta'anis baasii doolaara mil 900 ta'uun gara biyyattiitti ergamaniiru.